IFTIINKACUSUB.COM: Saxaafadda iyo Af-Suuqdiga .
Saxaafadda iyo Af-Suuqdiga W/Q: Cali Cabdi CoomayDhawaan ayaan ku arkay mid ka mid ah wargaysyada Hargaysa isaga oo bogiisa hore ku soo xardhay luuqada xambaarsan af-suuqdiga ay dhallinyaradu ku hadasho. Wargaysku wuxuu bulshada Soomaalilaan doonayey in ay warkiisa wada fahmaan, hasayeeshee muu daransanayn in Af-suuqdigu yahay af u gaar ah dad gaar ah. Taasi ayaa igu dhalisay in aan qoraalkan sameeyo. Bal marka hore si guud u dulmaro shaqada suxufiga. Suxufiga waxa looga baahan yahay inuu noqdo qof u dhexeeya, arrimaha ka dhacaya deegaanka uu ka soo warramayo.
Dadku way kuu siman yihiin. Maaha inaad dadka qaarna soo dhawayso, qaarna aad fogayso.Maaha kaalinta weriyuhu inuu kala xukumo sax iyo khaladka, runta
iyo beenta wixii la kala sheegto, ama inuu go’aamiyo dhinicii run sheegaya ama inuu waan waan ka dhexdhaliyo dhincayada is haya.Waxa kaliya eed meesha u joogtaa inaad sheegto aragtida labada dhinac, iyo wixii dhacaya ee socda wakhtigaasi, waxa taagan iyo duruufaha meesha ka jira. (Current Issues). Si weyn isaga hubi waxaad tabinaysid, inay yihiin fikradda labada dhinac. Taasina waa tiirarka waaweyn ee saxaafadda iyo suxufiga.
Bal ka warran erayadan, haddii aad ku dartid war ama warbixin: Tuushka ayuu cararayaa, horuu u soo fadhiyaa,Qardhaas u xidh,Casaan baa saaraan, Riyahaa toosiya, Warkaagu shaaha ka madow,Gor-gor baa saaran, Injection-kaad badsatay, Buul buu dhisay, Toosh buu daba qaatay, Liidkuu raacayaa, Waa laga habaystay, Haygaga shuban, Qoosh buu garaacayaa, Fadlan kor u hay, Buul buu iga daba raray, lugtuu aastay,Waa loo raran yahay, Shahaadadaa loo dalbay, Baddaa ku kacsan, Maskaxduu furtay, Yaasiinkaa dhaafay, luuq buu ku jiraa IWM.
"Af-gurigu ma xuma haddii dadka deegaankaasi kula fahmayo"